Nikija ny orana: niakatra ny rano amin’ny faritra iva | NewsMada
Nikija ny orana: niakatra ny rano amin’ny faritra iva
Orambe ny teto Antananarivo sy ny manodidina, omaly tolakandro. Tao anatin’ny ora iray, niakatra ny rano amin’ny faritra iva. Sahirana ireo rehetra nandeha teny Behoririka sy teny Antanimena iny. Toraka izany ny teny 67 ha sy teny Ankazomanga.
Mety efa mahazatra ireo mponina eny an-toerana izany. Efa misy ny fanamboarana ireo lakandrano any ambanin’ny arabe tanterahin’ny kaominina amin’ireo toerana maromaro eto Antananarivo. Anisan’izany ny asa tanterahina eny Andohatapenaka eny amin’izao fotoana izao. Eo koa ny lakandrano vaventy namboarina eny Ambodimita manaraka ny “digue” iny. Tanjona amin’izany ny hampihenana ny tondradrano rehefa fahavaratra toy izao.
Hatreto aloha, mbola betsaka ireo toerana mora dibo-drano. Mbola vao manomboka ny fahavaratra. Tsy tsikaritra loatra koa ny fanadiovana lakandrano nataon’ny Apipa nandritra ny fotoan’ny maintany. Mizaka ny riaka rehetra avy any amin’ny faritra avo toy ny avy any Andohalo, avy any Faravohitra… ny faritra iva toy ny eny Mahamasina, ny eny Tsimbazaza, ny eny Analakely… hatreny Isotry sy hatreny 67 ha rehetra iny.